Bhengeze nge Martech Zone | Martech Zone
Onke amasimi ayafuneka!
Zonke iZithuba zeNtengiso zigcwele. Nxibelelana nathi ngefom yoqhakamshelwano.
Ukufikelela ngenyanga kubanini bamashishini abangaphezulu kwama-50,000 XNUMX, abenzi bezigqibo, iingcali zentengiso, kunye neengcali zentengiso.
I-77.3% yeendwendwe zethu zifika zivela kwiinjini yokukhangela.
Umatshini oguqulweyo kwiilwimi ezingaphezu kwe-100 nge-70% yesiNgesi.
Yonke imihla kunye neeveki ezingama-30,000 ababhalisile kwi-imeyile.
Imithombo yeendaba yokudibanisa elandelayo inabalandeli abangaphezu kwama-50,000 XNUMX.
Abakhenkethi bethu baphanda, bafumanisa, kwaye bafunda itekhnoloji elandelayo yokuthengisa kunye nentengiso kunye neendlela ezinxulumene noko. Uhlalutyo lubeka oku njengezona mfuno ziphambili:
Iinkonzo zeNtengiso kunye neNtengiso
Isoftware yoShishino kunye neMveliso
Iinkonzo ze-SEO kunye ne-SEM
Martech Zone Iphethwe kwaye iqhutywa DK New Media, LLC, iarhente ye Douglas Karr. Ukuba ungathanda iingxelo zohlalutyo ezineenkcukacha, nceda unxibelelane nam.
Amacandelo Okuthengisa Kwangoku
Icandelo elifakiwe -Ili candelo eliphambili ngokuthe ngqo ngezantsi kwethu kwinqanaba lokuhambisa kunye nebar yesaziso kwaye likho kuwo onke amanqaku kunye namaphepha aphambili esiza. Kukho zombini idesktop kunye nohlobo lweselfowuni olukhoyo.
Ngaba ufuna iNkqubo yesiNtu?
Sinokukwenzela iinkqubo zesiko ezisekwe kwisixhobo, ilizwe, udidi, kunye noluhlu lomhla. Nceda unikeze iinkcukacha ukuze sikwazi ukuxoxa ngale nto nawe. Nceda UNGAYisebenzisi le fomu ngolwazi malunga nezithuba ezixhasiweyo okanye izicelo zangasemva. Isicelo sakho siza kucinywa.